Kurotswa naMwari | Zvinotaurwa neBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese (Brazil) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Zulu
Mwari airotsa vanhu kuti avaudze zvimwe zvinhu here?
“[Muprofita waMwari] Dhanieri akarota hope . . . ari pamubhedha wake. Panguva iyoyo akanyora hope dzacho. Akataura nhoroondo yakazara yenyaya dzacho.”—Dhanieri 7:1.
Mwari aitaura nevanhu nyaya dzinokosha achishandisa nzira dzakasiyana-siyana. Pane dzimwe nguva aitaura navo kuhope. Asi dzakanga dzisiri hope dzatajaira dzisina zvadzinoreva. Hope dzairotswa naMwari dzine zvadzaireva. Somuenzaniso, muprofita Dhanieri akaoneswa zvikara zvaimirira hurumende dzakasiyana-siyana kutangira pane yeBhabhironi kusvika iye zvino. (Dhanieri 7:1-3, 17) Mwari akataura kuhope naJosefa baba vaJesu, kuti atizire kuIjipiti nomudzimai wake nemwana. Izvi zvakaita kuti Jesu asaurayiwa naMambo aiva noutsinye ainzi Herodhi. Herodhi paakazofa, Mwari akaudzazve Josefa kuhope kuti achidzokera nemhuri yake.—Mateu 2:13-15, 19-23.
Mwari achiri kurotsa vanhu here?
“Musapfuura zvinhu zvakanyorwa.”—1 VaKorinde 4:6.
Mwari akanyora Bhaibheri kuti tizive zvaanoda uye zvimwe zvirimo ihope dzaairotsa vamwe vanhu. Ndokusaka 2 Timoti 3:16, 17 ichiti: “Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari uye runobatsira pakudzidzisa, pakutsiura, pakururamisa zvinhu, pakuranga nokururama, kuti munhu waMwari akwanise zvizere, akashongedzerwa zvakakwana kuita mabasa ose akanaka.”
Bhaibheri ‘rinotishongedzera zvakakwana’ pakuti rinotiudza zvose zvatinofanira kuziva nezvaMwari, mitemo yake, unhu hwake hwakanaka uye chinangwa chake pakutisika. Ndokusaka mazuva ano Mwari asingacharotsi vanhu kuti avaudze zvaanoda. Kana tichida kuziva kuti ramangwana rakamira sei uye zvinodiwa naMwari, hatifaniri ‘kupfuura zvinhu zvakanyorwa’ muBhaibheri. Anenge munhu wose anokwanisa kuwana Bhaibheri overenga kuti azive zvinotaurwa naMwari uye hope dzakanyorwa imomo.
Chii chingaita kuti uvimbe nehope dzakanyorwa muBhaibheri?
“Vanhu vakataura zvichibva kuna Mwari sezvavaitungamirirwa nomudzimu mutsvene.”—2 Petro 1:21.
Hope dzakawanda dzakanyorwa muBhaibheri dzine zvadzaireva zvaizoitika. Vanyori veBhaibheri pavainyora hope idzi paiva nomukana wokuti vapedzisire vava kunzi vanonyepa. Zvavainyora zvaizoitika here? Ongorora zvakaoneswa Dhanieri pana Dhanieri 8:1-7 hurumende yeBhabhironi payakanga yava pedyo nokuparara.
Dhanieri akaoneswa nhongo ichitunga gondohwe uye ichiritsika-tsika. Haana kuita zvokufungidzira zvairehwa nezvaakaona. Ngirozi yaMwari yakamuudza kuti: “Gondohwe rawakaona raiva nenyanga mbiri rinomirira madzimambo eMedhiya nePezhiya. Nhongo ine mvere inomirira mambo weGirisi.” (Dhanieri 8:20, 21) Mabhuku anotaura nyaya dzakaitika kare anoratidza kuti Medhiya nePezhiya ndidzo dzakakunda Bhabhironi dzikatanga kutonga. Uyewo pakazopera makore 200 Medhiya nePezhiya yakazokundwa naAlexander Mukuru wekuGirisi. Kunyatsoitika kwezvinhu izvi semataurirwo azvakanga zvaitwa kunoratidza kuti Bhaibheri rinotaura chokwadi. Izvi zvinoita kuti Bhaibheri risiyane nokure nemamwe mabhuku anoyera uye tinobva tada kuvimba naro.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kurotswa naMwari